Home Wararka Fahadow Ninkii Xumaan Falaa Waa inuu Xuman Fishaa.
Fahadow Ninkii Xumaan Falaa Waa inuu Xuman Fishaa.
Waa nacasnimo qof Tiitiin abuurtay inuu Moos rajeyeeyaa inuu u soo dasho. Fahadow Min Qalbi dhagax-Cabdirahxman CabdiShakuur ilaa Ikraan Tahliil haddey wanaag ahaayeenna Filo caddey human ahaayeenna Filo.
Fahad Yasiin ayaa la sheegay inuu qoray maqaalad uu cinwaan uga dhigay “ Ninkii Wanaag Fashaa Wanaag ayuu Filayaa” Maqaalkaas oo uu Fahad ku sheegtay inuu wanaag badan sameeyey oo ay tahay in wanaag loogu abaalgudo.
Taasi garannay maxaa laga yeelayaa qofkii xumaan Fashaa ee waliba u haysata inay xumaantaas wanaag tahay, kaas oo u dhigma qof middi caloosha ka geliyey qof kale oo haddana leh waa kuu daneynayey oo wanaag ayaan kuu falay.
Haddaba aynu eegno wanaagga uu sheegtay oo aan soo barbar dhigno wixii xumaan ah ee uu falay. Waayo Fahad nooma sheegin dhibatooyinka dalka laga sameeyey intii uu maamulka dowladda ka mid ahaa, haddiisa farta noogu fiiqi lahaa cidda Sameysay oo uu oran lahaa Farmajo ama Kheyre iwm ayaa kan iyo kan faleen anigu beri baan ka ahay waan fahmi lahayn. Laakiin kama haynaba inay wax yar oo xumaan ahi ayba dhaceen.
Haddaba waxaa ceeb, yaxyax iyo wax lala yaabo ah in Fahad Yasiin oo ay ahayd inuu dhuunto uu maanta ku fekerayo inuu ummadda u sheego inuu wax wanaagsan ay qabteen isaga iyo Farmajo.
Sida runtu tahay Fahad waa shakhsiga loogu neceb yahay dalka oo ah khaa’inul wadan dhibaato uusa dalkaan ka soo kaban kareynna gaarsiiyey. Dhibaatooyika Fahad uu ummaadaan u geystay maaha kuwa tira lagu soo koobi karo, waana taariikhda markii ugu horreysay shakhsi intaas xanuun ah ummadiisa ku sameyn kara isagoo is qarinaya. Waa jiraan rag kalitaliyayaal ah oo umadooda dhibaateeya, xanuuna uga taga sida sida Maxamed Siyaad laakiin ma qarsadaan.
Maqaalladda ku qoran Caasimada ee la leeyahay waxaa qoray Fahad yasiin waxaa ka muuqda inuu qoraaga maqaalka laba mid yahay:
Nin waalan oo aan waxba ka xusuusan tagtada iyo wixii la soo dhaafay, ogeynna dhibaatooyinkii uu dadka Somaliyeed u geystay isagoon ahayn shkhsi la doortay, balsa ku soo dugaalay mid uu siduu rabo ka yeelo oo la ogyahay inuu laba miirre (Bipolar) yahay.
Ama waa nin aaminay in Somalidu tahay doqoma illooba kuwa ku fala waxkasta oo xumaan ah, kadubna madax ka dhigta.
Intii uu beenta qorayey Fahad marnaba kama hadal dhiigga gacmihiisa ay leeyihiin o ah Sarkaalada Ikran Tahliil ee waxaa uu noosheegay in NISA ay horumar gaartay oo ilamheeda Cunto, waa waraabe sheegay inuu ariga baraare gaarsiiyey sannadakii uu ilaalinayey.
Fahad Yasiin waxay ahayd inuu damqado oo uu towbad keeno kana baxa siyaasadda Somaliya oo dhan, kadibna uu cafis qaran soo weydiisto, marka laga reebo dembiyda shaksiyaad uu ka galay sida Ikran Tahlil oo ku maqan hay’adda u uku faanayo inuu wax wanaagsan ku qabtay.
Fahad waxaa uu u yimid hay’ad koreysa , NISA, oo aqoonsan waajibaadkeeda qaran, taas oo si Sharaf leh u gudan jirtay haddasa uu ka dhigay koox burcad ah oo dadka lagu dhaco.
Haddaba waa maxay ujeedada hadalkan hadda ka soo baxay Fahad Yasiin?
Ujeedada koowaad: waa dib isu cusbooneysiinta Farmajo (rebranding) oo uu rabo inuu mar kale ummadda ku siro inuu yahay waddani dhisay ciidan, maamul, hogaan iyo sharafta dalka iyadoo qof waliba ay ogatahay inuu dalka gaarsiiyey meeshii ugu xumeyd oo ah in inta dayuurd d la saaro loo hogaamiyo sidii dhegoole eeg Sawiirada hoos la socda.
Tan labaad: Waxay rabaan inay xalay dhalay iska dhogaan oo mar kale noo muujiyaan inay ka xun xaaladda uu dalku. Ku sugan yahay balse Farmaajo iyo Fahad weligood ka ma nixin wiil Somaliyeed oo dhinta, kuma farxaan mid dhasha ee waa khaa’inu wadaniyiin ay tahay in laga gooyo wixii ay ummaddan u dhimeen, waayo weligiin ma ragteen iyagoo a tacsiyadeynaya falalka aragagixisada ay wada shaqeystaan?
Tan seddexaad: waa in caqligeenna iyo garashadeenna eek u aadan dalkeenna la tijaabiyo si loo ogaado inaan nanahy dad soo jeeda oo og ciddii xumaan u geysta waqtigana la sugeysa iyo inaan naha doqommo illooba kii shalay dabka saaray ee ka dilay intaas oo qof si toos iyo si toos ahaynba.
Fahad waxaa hadda uu rabaa inuu ka mid noqdo xildhibaanada Barlamanka 11aad ee Somaliya, kadibna uu iibsado G/K/Koowaad si uu mar kale Farmajo u soo saaro taas oo la hubo in ay shaqeyn doonaan inay soo helaan Gudoomiye maqaarsaar ah, RW calooshiis u shaqeysta iyo Fahad iyo Farmajo weli madxatooyada deggan. Bal qiyaasa sow ma noqon doonto burciidkii ugu dambeeyey qabriga Somaliyeed la saarayo.
Xataa inay nagu soo dhacdo ayaa xanuun iyo dembi ah, waayo dalkaan waxaa ku sugan yahay xaalad ah inuu ka baxo saaxadda siyaasadda, haddii uusan afarta sano soo socotaa hogaan waddani ah oo awooda inuu dib u dhayo boogaha ya Fahad iyo Farmajo abuureen.
Fahadow Xumaantaad Sameysay filo in mid la mid ah laguugu gudo ugu yaraan.
Previous article[Deg Deg] Golaha Wasiirada oo sheegay in dhiibistii Qalbi Dhagax aay ahayd Qiyaano & Qalad
Next articleMustafe Cagjar oo si weyn u soo dhoweeyay Go’aankIi Golaha Wasiirada
Dagmada qoryooleey oo dagaal ku dhax karay alshabaab iyo AMISOM
MW Farmaajo oo Golaha shacabka kacodsaday meel marinta Golaha Wasiirada cusub